အတိုးများသည့်တရုတ်ချေးငွေ ပြန်လည်စိစစ်ရန်လိုသည် / ဧရာဝတီ
By ထက်နိုင်ဇော် 28 June 2017
အတိုးများသည့် တရုတ်နိုင်ငံချေးငွေက တိုင်းပြည်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လက်ရှိအာဏာရ NLD အစိုးရကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်၍ ပြန်လည်စိစစ်ရန် ယနေ့ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်စားလှယ်တချို့က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ပြည်ပကြွေးမီ စုစုပေါင်း ၉ ဘီလီယံ ရှိရာတွင်၊ ထိုပမာဏထဲ၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ ချေးယူထားသည့်ကြွေးမြီသည် ချေးငွေစုစုပေါင်း၏ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိနေပြီး အတိုးနှုန်းမှာ ၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေကြောင်း ယနေ့လွှတ်တော်သို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တင်ပြလာသည့် ၂၀၁၇ ကာလလတ်ကြွေးမြီ စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က “ ကြွေးမြီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ကြီးမြင့်စေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံချေးငွေများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာချုပ်စာတမ်းတွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ လျှော့ပေါ့နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိရင် နည်းလမ်းရှာပြီး ၂ နိုင်ငံ အစိုးရများအကြား ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်” ဟု လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က “ တရုတ်ချေးငွေက ကျမတို့ ငွေရတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့နိုင်ငံထဲက ပစ္စည်းတွေ ကျမတို့ဆီကိုသွင်းတယ်။ အဲပစ္စည်းတွေကို ကျမတို့သုံးရတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေကလည်း အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အတိုးတွေလည်း ကြီးကြီးပေးရတယ်။ ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း Quality (အရည်အသွေး)လည်း မကောင်းဘူး” ဟု လွှတ်တော်အပြီးတွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှရယူထားသည့် ကြွေးမြီမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃,၉၇၂. ၃ ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄,၃၁၂. ၃ နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃, ၉၅၅.၇ တို့ကို ချေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ချေးငွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ထွန်းနိုင်က “ နိုင်ငံတကာ ချေးငွေဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် ပြေလည်ရင် ချေးငွေကာလကို ဆွဲဆန့်လို့ရတယ်။ ဆိုင်းငံ့လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပိနေတဲ့ တရုတ်ချေးငွေအတွက် ချေးထားတဲ့စာချုပ်တွေကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပြန်သုံးသပ်လို့ စာချုပ်ပါအရ အခြေအနေပေးလို့ရှိရင် အတိုးနှုန်းတွေကို လျှော့ခိုင်းလို့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကြွေးမြီအစီရင်ခံ၌ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေသည့် ပြည်ပကြွေးမြီများ မည်ကဲ့သို့ပြန်ဆပ်မည်ဆိုသည့် မူဝါဒမပါဝင်ခြင်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ထောက်ပြခဲ့ကြပြီး၊ အစိုးရအနေဖြင့် အတိုးနည်းလွတ်လပ်စွာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်သည့် ချေးငွေမျိုးကိုသာ ရှာဖွေသင့်ကြောင်း အကြံပြုကြသည်။
ကြွေးမြီများကို စီမံခန့်ခွဲနေသည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ပကြွေးမြီ အရင်းအတိုး ပြည်လည်ပေးဆပ်ရမည့် အစီအစဉ်အရ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ မှ ၇၀၀ အထိ ပြန်လည်ပေးဆပ်မည့် အစီအစဉ်များရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ပြည်ပကြွေးမြီများတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများထံမှချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁,၃၆၄.၂၊ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရကြား ချေးငွေအဖြစ် ပဲရစ်ကလပ်နိုင်ငံများထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃,၃၀၁.၃၊ ပဲရစ်ကလပ် မဟုတ်သောနိုင်ငံများမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄,၃၂၄.၄ တို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။